Ladies iiglavu zezikhumba zeegusha ezinemithungo emibini
Isitayile esiqhelekileyo, esenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia segusha, kunye ne-cashmere lining, kunye ne-backback ekhonkxwe ngemitya emibini, ijongeka ngathi ilula kwaye inencasa. Bonelela ukuziva okuhle ngezihlandlo ezininzi ukusuka kunxiba ngokungaqhelekanga!
Amakhosikazi iiglavu zezikhumba zeegusha ngesaphetha
Uhlobo lobomi, Lenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia segusha, enesilinda esiswini, Kwaye umva ubhinqiwe ngesaphetha, ujongeka ngathi uhlala kwindalo .Umbala wesilika ubonakalisa ukuziva kakuhle kwezandla zakho, Nxiba kamnandi izihlandlo ezininzi!
Amadoda iiglavu ezimnyama zezikhumba zeegusha ezinekhukhoshi
Iglavu yokuhombisa kunye nesitayile, Yenziwe ngesikhumba segusha se-paihuang, kunye neliningmari ye-cashmere, ukuthungwa okutyebileyo, okutyebileyo kwesikhumba, iifashoni zakutshanje kunye nobugcisa obukhulu. indibaniselwano egqibeleleyo! Eyona nto inxitywayo kwi-fanshion paty!
Iglavu yokuhombisa kunye nesitayile, Yenziwe ngesikhumba segusha se-paihuang, kunye neliningmari ye-cashmere, ukuthungwa okutyebileyo, okutyebileyo kwesikhumba, iifashoni zakutshanje kunye nobugcisa obukhulu. indibaniselwano egqibeleleyo! Cuffac cuff kunye namanqaku ama-3 athungayo ngasemva, abonisa okungaqhelekanga kunye nokubamba amehlo.
Amanenekazi egusha aqhuba iiglavu ngaphandle kwelayini
Zenziwe ngesikhumba esithambileyo nesolulekayo, iigloves zibonakaliswa ngemingxunya yesitayile, umtya wesandla kunye nokuvalwa kwetyathanga leViscose. Isebenziseka lula. Isikhumba esityhidiweyo kunye nomoya ongena ngasemva ubonelela ngokuphefumla okuphezulu-amandla kunye nokuguquguquka kwezandla zakho.
Iiglavu zeeLady zeegusha ezinamaqhosha amahlanu ngasemva
Yenziwe ngofele lwegusha oluthambileyo kwaye luhlala ixesha elide, kukhululeke kakhulu ngokulungeleleneyo kwaye kulula ukuyisebenzisa, ukubonelela ngokuziva kulungile kwizandla. Umsebenzi, ukuhlwa ngokuhlwa, okanye ukunxiba imihla ngemihla!
Amanenekazi egusha aqhuba iiglavu ngesandla esenziwe ngezandla
Iiglavu zeeLady zeegusha ezinemigca emi-2 yokuthunga ngesandla ngasemva
Umsebenzi, ngokuhlwa ngaphandle, okanye ukunxiba imihla ngemihla! Jonga umhle kwaye uyathandeka. Le glavu inxibe kakuhle kule minyaka idlulileyo kwaye iya kuqhubeka ikukhonza emva kwexesha lonyaka.
Ladies Iiglavu zezikhumba zeegusha ezinemiqolo emithathu yokuthunga ngesandla
Isitayile esingaqhelekanga, esenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia segusha, esinelinen yesilika, kunye nomqolo ongqengqelekileyo onemiqolo emithathu yokuthunga ngesandla., Ijongeka ngathi ilula kwaye iyathandeka. Bonelela ukuziva okuhle ngezihlandlo ezininzi ezingaqhelekanga!
Amadoda iiglavu zezikhumba zeegusha ezinemihlobiso yesikhumba
Isitayile esingaqhelekanga, esenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia segusha, esinelinen yesilika, Kwaye umva ubhinqiwe ngebhanti lesikhumba, Yenza ulunge ngakumbi kwaye ukhululeke ezandleni zakho.
Ladies iiglavu zezikhumba zeegusha ezineziphu ngasemva
Yenziwe ngesikhumba sezimvu esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia, kunye ne-cashmere lining, Kwaye umva ubhinqiwe nge-zipper, iziqwenga ezibini zeleta ye-Willow, zilumke kwaye zithandeka. bonelela ukuziva okuhle ngezihlandlo ezininzi ukusuka kwizinto eziqhelekileyo ukuya kwisinxibo!
Ladies iiglavu zezikhumba zeegusha ezinemithungo ye wavy
Isitayile esiqhelekileyo, esenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-ethiopia segusha, kunye ne-cashmere lining, kunye ne-backback eboshwe ngeentambo ze-wavy, ijongeka ngathi ilula kwaye inencasa. Bonelela ukuziva okuhle ngezihlandlo ezininzi ukusuka kunxibe ngokungaqhelekanga!